I-al Duca B&B - Bergamo Downtown - I-Airbnb
I-al Duca B&B - Bergamo Downtown
I-B&B al Duca (ehlanzeke ngokuphelele, yapendiwa kabusha futhi yalungiswa kabusha ngoMeyi 2020) itholakala maphakathi neBergamo, endaweni "eco-friendly" enengadi. Ifulethi elinegumbi lokugezela langasese, lingahlalisa abantu abangu-1 kuye kwabangu-5. Ukudla kwasekuseni kufakiwe.
Sikholelwa ngokuqinile ekuhlonipheni imvelo: ugesi, ukufudumeza nokupholisa kukhiqizwa ama-solar panels emini, ebusuku anikezwa amandla amabhethri ahlala eshajwa kabusha ngama-solar panel. Ukuhlanganiswa kokushisa ne-biomass yendawo.
I-Bed & Breakfast al Duca itholakala maphakathi ne-Bergamo, endlini eyi-villa enengadi. Inikeza izivakashi zayo ifulethi elinendlu yokugezela yangasese elingana nezidingo zabahambi futhi ekwazi ukuhlalisa abantu abangu-1 kuye kwabangu-5.
Ngokuqondene nemibhede, kunamathuba ahlukene, njengoba kuboniswe ezithombeni: uma kungenzeka njalo bonisa lowo omthandayo kangcono.
Ilungele imindeni, kodwa futhi ilungele uhambo lwebhizinisi noma amaholide. Isitayela sesimanje kanye nelanga endlini yama-'40s, esanda kulungiswa, endaweni ethule kakhulu.
Amasevisi: indawo yokupaka yangasese, i-wifi yamahhala, ingadi enovulandi wezivakashi, ibhulakufesi, i-tv egunjini, ukuzifudumeza, isimo somoya, izindawo zamabhayisikili.
Onawo, kanye nesisefo sezinto zakho ezibalulekile, ikhishi elinesiqandisi, i-microwave, umshini wekhofi we-Nespresso, iketela letiye, i-toaster, usinki, izitsha.
Ukufinyelela efulethini kungamakhadi afakwe ikhodi futhi kuzimele ngokuphelele. Ukungena kungenzeka kuze kube sebusuku kakhulu, ngesaziso ngaphambi kokufika.
Simaphakathi neBergamo, izinyathelo ezimbalwa ukusuka e-Piazza Pontida: izindawo zokudlela eziningi zazo zonke izabelomali, eduze nemigwaqo yezitolo yabahamba ngezinyawo, eduze nezitobhi zamabhasi (amamitha angu-200), isiteshi sesitimela singaphansi kwe-Km eyodwa. Ibhasi elisuka esikhumulweni sezindiza liqhele ngamamitha angu-600.
Yini ehlukile nge-B&B yethu? Sicabange ukwenza izivakashi zethu zizwe sengathi zisekhaya. Okufanayo singathanda ukukuthola lapho sijikeleza umhlaba.
Ikhodi yesifunda 016024-BEB-00081.
Isakhiwo sijoyine iphrothokholi ye-#Bergamo Sicura
Imikhiqizo esetshenziselwa ukuhlanzeka kwezakhiwo namathuluzi yilena: I-Saniquat Casa noma i-Taysteril; Futha i-Pavoni noma i-Oust; Sandik noma Utshwala 90 °; Napisan noma okulinganayo.
4.82 · 201 okushiwo abanye
Sisenkabeni ye-Bergamo, izinyathelo ezimbalwa nje ukusuka endaweni yabahamba ngezinyawo yezitolo. Izinyathelo ezimbili futhi uzothola konke okufunayo. Emamitha angamakhulu ambalwa: inkantolo, umtholampilo waseCastelli noSan Francesco, i-Academy of the Guardia di Finanza, amachibi, amabhange, izitolo ezinkulu, isibhedlela, wonke amahhovisi amakhulu.
Kuzivakashi zethu sihlala sitholakala, uma kunesidingo. Kokunye senza konke okusemandleni ukuhlonipha ubumfihlo babo. Ngaphakathi kwe-B&B ungathola amamephu edolobha, amabhasi, imihlahlandlela yokuvakasha ngazo zonke izilimi, uhlu lwezindawo zokudlela nezindawo ezidayisa ukudla kwase-pizza eduze lapho ungadla khona kahle ngentengo ehloniphekile.
Kuzivakashi zethu sihlala sitholakala, uma kunesidingo. Kokunye senza konke okusemandleni ukuhlonipha ubumfihlo babo. Ngaphakathi kwe-B&B ungathola amamephu edolobha, amabhasi, imi…
Inombolo yepholisi: 016024-BEB-00081